Soo -saarayaasha Qalabka Ceyriinka ah | Alaab -qeybiyeyaasha alaabta ceyriin ee Shiinaha & Warshadda
Qalab ceyriin ah
Kiniiniyada Chlorella 500mg oo Qani ku ah Fiitamiinada Difaaca
Budada Spirulina 4.23oz/120g oo hodan ku ah Antioxidant
Kiniiniyada Spirulina 500mg
Blue Spirulina (Phycocyanin) 2.11oz/60g
Maaddi cayriin-Heerka quudinta xayawaanka Spirulina Powder oo hodan ku ah Antioxidant, Macdanta, Aashitooyinka dufanka leh, Fiber iyo Protein, No Irradiated, No contaminated, No GMOs
Spirulina waa nooc ka mid ah dhirta hoose, waxaa iska leh cyanophyta, rivulariaceae. Iyaga iyo bakteeriyadu, intracellular ma laha nuclei dhab ah, mar kale waxay dhahaan sidaas bakteeriyada buluugga ah. Qaab dhismeedka unugga algae buluugga ah ee asalka ah, aadna u fudud, waa dhulka oo u muuqda noolaha ugu horreeya ee sawir -qaadista, meerahan waxaa lagu sameeyay 3.5 bilyan. Waxay ku dhex baxdaa biyaha, microscopy -ga foomka loogu yeero filamentous spiral, sidaas darteed magaceeda.
Qalab ceyriin ah - Powder Chlorella Dabiiciga ah oo La Xaqiijiyay
Badeecadani waa sumurud, waxay leedahay ur algae sifo, waxay ka kooban tahay borotiin sare, dufan hoose, sonkor yar, kulayl aad u hooseeya, iyo faa'iidooyinka fiitamiin hodan ah, waxyaabaha macdanta ku jira. Chlorella wuxuu hodan ku yahay arrimo korriimo koloflool iyo chlorella (CGF), oo leh dhammaan noocyada asiidhyada amino, waxay si buuxda u dabooli kartaa baahiyaha koritaanka iyo aadanaha, xayawaanka, waa il wanaagsan oo borotiin unug keliya ah, oo si weyn loogu isticmaalo cuntooyinka caafimaadka leh iyo beeraha cuntada shaqeynaya. , waxay leedahay suuq baaxad leh.
Powder Spirulina Dabiiciga ah oo La Xaqiijiyay Ma Jirto GMOs iyo Khudrad Fiican
Badeecadani waa cagaar madow, waxay leedahay ur algae. Badeecadani waxay leedahay nafaqo hodan ah oo buuxa, waxay ka kooban tahay borotiin aad u sarreeya, waxay hodan ku tahay noocyo badan oo fiitamiino ah, macdano iyo walxo kale oo raadraac ah oo jidhka bani'aadamku u baahan yahay. Dufanka oo hooseeya iyo waxa cellulose ka kooban, laakiin lipids -kiisu waa ku dhawaad ​​dhammaan aashitada dufanka leh ee aan fiicnayn. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay maadada birta nuugista ee ugu sarreysa dhammaan cuntooyinka, waxay hodan ku tahay phycocyanin iyo tiro kale oo badan oo ah macdanta iyo walxaha noolaha oo hagaajin kara difaaca.
Waxyaabaha Ceyriin - Blue Spirulina (Phycocyanin) Superfood Non GMO, Vegan +
Blue Spirulina (Phycocyanin) 2.11oz/60g, Superfood laga keenay Blue-Green Algae, Midabka Cuntada Dabiiciga ah ee Dheecaanka & Cabitaanka Borotiinka-Aan ahayn GMO, Gluten-Free, Caanaha-Ka-xor, Khudaar +
Phycocyanin (Spirulina buluug) waa nooc ka mid ah budo buluug cirka laga soo saaray spirulina. Waa nooc ka mid ah borotiinka, sidoo kale waa midab dabiici ah oo la cuni karo oo dabiici ah, iyo sidoo kale cunto caafimaad leh oo wanaagsan. Phycocyanin waa mid ka mid ah borotiinnada midabka dhif ah ee dabeecadda, ma aha oo kaliya midabo, laakiin sidoo kale waa nooc ka mid ah borotiinka nafaqada leh, isku -darka amino acid -ka ayaa dhammaystiran, oo leh waxyaabo aad u sarreeya oo ah asiidhyada amino ee lagama maarmaanka ah.